Wejiga Looma Fool-Dhaqo, Nimaad Fool-Xumidiisa Aragto ( Abdi-Shotaly).
Tuesday 5th February 2019 09:16:36 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Aduun-yadda nin noolow maxaa aragti kuu laaban, beri baa nin Diiriye la odhan jirey,
uu gabadh kula aqal galay, guriggii reerkii ay ka dhalatay, oo ah nooca ay somalidu tidhaaho "Inan la yaalka", oo micna-heedu yahay, marka aad la degan tahay reerka ama qoyska, ay ka soo jeedo gabadha aad guursatay. Ninkii odayga ahaa ee Mr Diiriye, markii loo guri geliyey inantii, waa ka iska barbar seexday, ee dhan-keeda-ba u jeesan waayey, yaabtay inantii oo kolba wax ku tashatay, kola ay jilibka ku dhufa-to, siddii wax is rogaaya, iyo kola ay gufac aan hayn iska keento, si ay u toosiso, ilayn waa kan khuuradda galaye ee dirgan waayeye. Waxay sidaas ahaato-ba, oo ay inantii wax ku hadsho-ba garan waydo, hadba madaxa xoqoto, oo ay si walba uga quustay, ogaatay in aanay kan seedi u dhanaanayn, oo uu hor illaahay ka taagan yahay, arimaha ay ka sugayso, mid wax isla hayana aanu ahayn, bay candhuuf-teeddii dib uga liqday, oo ay tidhi kan waad arag-taaye, mar dambe ha ku tahan-baabin, rajo kama soo jeedo'e. waxay gaadhay go'aan ah, in marka ay todoba-baxdo, ay reerka isaga dhalay isugu yeedho, si asturana ugu tidhaahdo anigu nin ma hayo'e, bal ama nin kale ii keena, kani waa gabaa-hirig oo ninimo ka waayeye, ama aynu kala hawl yaraysano, intaan wakhti inaga halaabin labadeena qoys-ba. Akhristaw iyadda oo sidaas iskaga qulubsan, oo ku waalatay tima feedhasho, marna is tidhaaha guriga ma uga baxdaa, bay dhamaadeen tobaddii cisho ee aroosku, bal-se maxaa ka dambeeyey, halkan hoose kala soco.
Subixii sideedda markii xoolihii la maalay, baa waxa ku soo kalah-day, gabdh kale oo inaadeer-teed ah, oo wadda degan yihiin reerka, waxay ku tidhi intay aqlkii is hor taagtay "Naayaa Barako Todobaddii cisho kuu dhamaadee, ka soo bax gurigga, caano luguaha ha laguu geliyee" Waxay ugu jawaabtay "Dulmareey weli dab laguma shidan gurigan" ee waa maxay todobadda maalmood ee aad ii tirisay, dambarkii maandeeq weli waan sugayaa, oo koob lis ah kama aan dhadhamin weli. Dulmar yaabtay, oo waxay fahantay, in aan inanta weli hawl-ba laga qaban. iyadda oo labadda dhaban haysata waata dabeed u dhaqaaqday, xaggii buul-cawskii ay beriggii hore wadda seexan jireen, intaan Mr Diiriye loo meherin. Dulmar wax ay ku hadsho iyo cid ay u sheegto, wax ay tidhaaho iyadda oo garan la, oo ay ka wareerisay sidda ay ugu dhacday saaxiiba-deed " Miss Barako", baa habeenkii Sagaalaad, reerkii col u soo dhacay, oo geelii laga dareersaday saqddii dhexe. Ninkii Diiriye, markuu maqlay qayladda iyo sawaxanka, waa ka qori la cararay, ee yidhi geela baan soo dhicinayaa. ee ka soo booday gurigii isaga oo kun-kuunsan, halkaa markay maraysay, baa waxa aragtay, inantii Dulmar ee sheeka-diisa haysay, dabeed way u yeedhay oo waxay ku tidhi " Diiriyaw xagaad ku ordaysaa ee aad qoriga u sidataa?" Wuxu yidhi, dee nin baan ahayoo waa in aan geela wax ka dhiciyaa. Inantii Dulmar inta ay dhoosha ka qososhay, baa waxay tidhi, Diiryaw raganimo halkaad ka joogto, waynu isla og-nahay, geelan rag baa iska leh, haday soo dhicina-yaan, iyo haddii ay sidaa kaga hadhayaan-ba ee"Diiriyaw adigu taadda ku foof". Hawl weyn baa kuu taalay ilaa intii aad la aqal gashay Miss Barako" oo lagaa sugayaa fulin-teedda, geelan ragiisii waa joogaa, wuxuu ka yeela-ba, adigu arimaha guri-gaaga qabso, oo yaanay dib dambe kaaga bay lihin.
"Wejiga looma fool dhaqo, nimaad fool-xumidiisa aragto" bay Somalidu tidhaahaaye,Ujeediyo haatan, waxan sheekadan u soo qaatay, kuna soo gabaga-beeyey maqaalkan. Labadan askari waa la ogaa waxay halgankii ahaayeen, oo waa kuwii laga inaab-saday, lamana hayo kob cagaar leh, oo ay ka soo durduri-yeen ilaa iyo wakhtiggii SNM-tii, Dagaalkii maryo-aloolka, iyo intay nafi ku jirtay-ba, ilayn wax inoo kala qarsooni ma jiraan, oo Mr Diiriye halkaa uu ka taagnaa hawshaas sare ku qeexan, mid-la-mid ah ama ka sii liidata, baa xaal-koodu ku sinaaye, ma imika bay salal-madhle iyo sakaaro kuu soo solayaan? Somaliland baanu badbaadi-naynaa hadda, waxay ka dhigan tahay, qoriga uu la orday Mr Diiriye, isaga oo og halkuu raganimo ka joogo, oo ku damba-basaaya ciladiisa hoose, doonaayana in uu dhalan-teed u dhigo xiddidka. Muwaadin waa sidaase, Geeno shaaximaan iyo Raggii ma adigaa ka hadhay, waynu ka dheregsan nahay waxay yihiin, sidda ay u fekeraan, cuqdadda ay beelo gaar ah ka qaban, ee ma nahay qaar ay isu nasikhi karaan? Waxan ku soo af-jaray, Somaliland waxa uga tirsan tihiin Mr Diiriya-haas ku sharaxan sare, ee yaad u durbaan garaacay-saan ee aan idin aqoon? Ma cid aan reer Somaliland ahayn oo kale? kuwa halkaa dhigay ee rakaadiyey dalkii iyo dadkii waa ayo? Ma cid kalaa cirka uga timi?, waa kii iyadda oo dalka iyo dadku samadaa marayaan, uu Madax-Weyne Daahir Riyaale Ku wareejiyey kulmiye, ee mee dadkii iyo dalkii wadda socday? Yaa kala irdheeyey? Ee foodda isu geliyey? U kala ab-tiriyey? inba gaar u faquuqay?. Saw idinka maaha kuwa la eeday, ee caku iyo waydda hadh iyo habeen shicibku dib-naha la qaniinayaan? Ma xiniiyo iib ah baa la idiin soo tumay?, siddii tooray-ddii kamaanadda baabuurta laga samayn jirey? Tani way is taqaan, oo isku leex-leexan mayso, waxad tihiin Mr Diiriye Walaaladiiye, ee ha is lugoy-nina waxa-ba islama ahysaane.
N.B Diiriyaw Adigu Taadda Ku Foof!
''Siyaasi X Jigraale Ciidan Dalku Bandow Buu Ku Jiray, Colaad iyo Dagaal Looma Taag Hayo Madaxweynahana'&
Tallo Askari Ka Kuur Mooyee Ku Guur Ma Laha ( Abdi-Shotaly).
Fikirkeyga Xorta Ah , Somaliland, Looma Duub Duub Naado,Dowlladd Guracan,?
Hore Looma Socdee Dibaa Loo Socdaa
W/Q Yuusuf Jaamac Maxamed
Askarigu Waa Mashaxarad Jecel ( Abdi-Shotaly).